Ungasarudza sei Fertilizer Kuomesa Muchina
Usati wasarudza fetiraiza yekuomesa muchina, iwe unofanirwa kuita ongororo yekutanga yezvido zvako zvekuomesa:
Zvinongedzo zvezvimedu: Ndeapi masimba epanyama kana akanyorova kana kuoma? Chii chinonzi granularity kugovera? Inokuvadza, inopisa, inoparadza kana inopwanya?
Maitiro anodikanwa: Chii chinonzi hunyoro hwezvinhu? Hunyoro hwakagovewa zvakaenzana mukati mezvikamu here? Ndezvipi zvekutanga uye zvekupedzisira hunyoro hwemukati hwezvinhu? Ndeipi yakanyanya kutenderwa kuomesa tembiricha uye kuomesa nguva yezvimedu? Iyo tembiricha yekuomesa inoda kugadziridzwa mukati mekuoma?
Unyanzvi hunodiwa: Zvinhu zvinoda kugadziriswa mumabatch kana kuenderera? Yakawanda sei zvinhu inofanirwa iyo fetiraiza yekuomesa muchina mubato paawa? Zvinotora nguva yakareba sei kuti uwane zvigadzirwa zvemhando yepamusoro? Maitiro ekugadzira asati uye nekuomesa anokanganisa sei sarudzo yefetiraiza yakaoma?
Unhu zvinodiwa kune apedza zvigadzirwa: Ko zvinhu zvinodzikira, kudzikisira, pamusoro-kuoma, kana kusvibiswa panguva yekuomeswa? Yunifomu inofanirwa kunge yakaita sei humhutu hwayo hwekupedzisira? Chii chinofanira kuve tembiricha uye huwandu hwehuwandu hwechigadzirwa chekupedzisira? Ko izvo zvakaomeswa zvinogadzira guruva kana zvinoda zvechipiri kupora?
Mamiriro chaiwo ezvakatipoteredza eiyo fekitori: Yakawanda sei nzvimbo yekugadzira inowanikwa yekuomesa maitiro mufekitori? Chii chiri tembiricha, hunyoro uye rucheno rwefekitori? Chii chirimwa chakashongedzerwa nesimba chairo zviwanikwa, pedza gasi chiteshi? Zvinoenderana nemirau yezvakatipoteredza, ndeipi huwandu hweruzha, kudengenyeka, guruva uye kupera simba kwesimba kunotenderwa muchirimwa?
Nekutarisa nyaya idzi, vamwe michina yekuomesa manyowa izvo zvisina kukodzera kugadzirwa kwako chaiko zvichabviswa. Semuenzaniso, hunhu kana hwekugadzirisa hunhu hwezvigadzirwa hazvingasarudzi zvimwe michina yekuomesa manyowa, steam-mhando inotenderera dhiramu fetiraiza yekuomesa michina yehupamhi hunyoro zvemukati, viscous hombe mbishi zvigadzirwa senge mica haisi sarudzo yakanaka. Iyo Rotary dhiramu fetiraiza yekuomesa muchina inofambisa zvinhu ichichiomesa nekutenderera nekuumburuka, asi uku kungoisa zvinyoronyoro hakutakure zvakatsetseka zvinhu kune iyo kuburitsa, sezvo iyo viscous zvinhu inonamira kumadziro edhiramu uye pombi yemhepo, kana kutogwamba. Panyaya iyi, anotenderera anotenderera kana asina kunangana akawanda-dhisiki fetiraiza yekuomesa michina iri sarudzo iri nani, ichi chinoshanda kuendesa, inogona kukurumidza kuendesa mica kubva kuchikafu chengarava kuenda kubuditsa chiteshi.
Tevere funga nezve fetiraiza yekuomesa muchina iyo inosangana neyako chaiyo tsoka uye yekugadzira nzvimbo. Bvisa chero michina yekuomesa mafetiraiza isingakodzeri mamiriro aripo ekugadzira kana ayo anoda kudhura ekugadzirisa kana kuwedzera mari. Uyezve funga iyo homwe yemari uye mashandiro ekushandisa uye zvimwe zvinhu.
Kana iwe ukasarudza yakakwira-yekuita fetiraiza yekuomesa muchina kuti ugadzirise yako iripo yekuomesa maitiro, iwe unofanirwa kufunga kuti ndezvipi zvimwe zviripo zvigadzirwa, senge conveyors, feeders, unhani muchina, kavha michina, matura, uye mimwe michina, zvinogona kuenderana nekuwedzera kugadzirwa kwemachina matsva ekuomesa michina.
Sezvo huwandu hwemanyowa ekuomesa muchina sarudzo uchidzikira, shandisa zviripo zvinhu uye nharaunda dzekugadzira dzavepo kuti uone kana iyo fetiraiza yekuomesa muchina yakanyatsokodzera.
● Mamiriro akanakisa ekuomesa zvinhu zviripo.
● Mhedzisiro yemushini wekuomesa fetiraiza pazvinhu zvakasikwa.
● Kunyangwe hunhu uye hunhu hwezvakaomeswa zvinoenderana nezvinodiwa.
● Kuti muchina wekuomesa fetiraiza wakakodzera here.
Kubva pane izvi bvunzo mhedzisiro, iyo inogadzira muchina wekuomesa manyowa inogona zvakare kupa yakadzama kurudziro kuti izadzikise zvizere yako yekuomesa zvido. Ehe, kuiswa uye mashandiro emutengo weiyo fetiraiza yekuomesa muchina uye zvinotevera zvinotevera zvinodiwa zveiyo fetiraiza yekuomesa muchina haifaniwe kufuratirwa.
Kutora zvese zviri pamusoro apa uchifunga, unogona chaizvo kutenga muchina wakakodzera kwazvo wekuomesa manyowa.